န ဟိ ဝေရေန ဝေရာနိ၊
အဝေရေန စ သမ္မန္တိ၊
ဧသ ဓမ္မော သနန္တနော။
Hatred is never appeased by hatred in this world;
it is appeased by love. This is an eternal law.
အကြမ်ဖက်မှုဖြင့် ဘယ်သောအခါမှ မငြိမ်းသတ်နိုင်၊
မင်္ဂလာယူရမည့် နှစ်ကူးသင်္ကြန်တော်အခါသမယတွင် ကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးကြုံ၍ ဘ၀ကူးကြရ၊ ဘ၀နာကြရသူများအတွက် ထပ်တူစာနာမိပါကြောင်းနှင့် လိုရင်းပန်းတိုင်မရောက်နိုင်သော အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှအား ကန့်ကွက်ရှုံ့ချလိုက်ပါကြောင်း။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 5:48 AM
ဘယ်သူလက်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ခက်ကုန်ပီ။ ၇ူးချက်ကတော့ ကမ်းကုန်နေကြပီ။ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းမိပါကြောင်း။
lovechelsea ရယ်.....။အလကား...trick တွေပါဗျာ...။လူတွေသေတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့..ခံရပေါင်းများတော့..ဘယ်သူ့လက်ချက်ဆိုတာ...“ဒါမျိုးတွေ..ရိုး....ဟိုး..ဟိုးနေဘီ” ....။ “တိုင်းပြည်ချောက်ထဲမကျမီလက်တလုံးအလိုတွင်.....ဘာဘာညာညာ”...မကြာမီ..လာမည်...မျှော်....
:-( အကြမ်းဖက်မှုတွေ ချုပ်ငြိမ်းပါစေ။း-(
အဟမ်း ကိုယ်သာ မြေအောက်အဖျက်သမား မသမာသူဆိုရင် ဘယ်မှာ ဗုံးကို ခွဲရမယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကို သိပါတယ် ခင်ညာ။
ဗုံးထောင်တဲ့သူကလည်း ရဲ မှ ရဲ ဗျာ..........
ပေါက်တဲ့ဗုံးကလည်း စစ် မှ စစ်ဗျာ........